Glass Beverage Bottle / ite Manufacturers, Suppliers - China Glass Beverage Bottle / ite Factory
200ml Amber Glass Pharmaceutical kalama, Erere ite wi ...
500ml amba iko beer kalama na siwing tụgharịa n'elu
16oz 500ml obosara n'ọnụ iko Mason ite na acha p ...
5oz woozy na-ekpo ọkụ ihendori efu karama iko na okpu na ...
Omenala iko senti karama dum set soplaya na China
3ML ọlaọcha agba CYLINDRICAL agba agba iko efu efu ntu ...
100 Efu Refillable Frosted Glass mgbapụta karama Cont ...
30ml amba iko mkpa mmanụ karama na tamper ev ...
30ml 60ml 120ml ogologo kwadoro amba iko ihu crea ...
8oz 250ml amba karama na nwa igwe anaghị st ...
8oz 250ml amba boston gburugburu iko ịgba karama bú ...
16oz 500ml doro anya boston gburugburu iko ịkpalite ịgba bo ...
250ml matte nwa iko ihe ọ bottleụ juiceụ onunu karama na aluminum mkpuchi
Anyị 250ml Clear Glass Juice Bottle nwere ike iji nọrọ n'ụlọ dị iche iche na ngwaahịa gụnyere mkpụrụ osisi juices, mmiri, mmiri ara ehi emee ka anya doo na ọtụtụ ndị ọzọ. N'agbanyeghị ọdịnaya gị, ha ga-adị mma n'anya ma mara mma na karama a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibupụta ma ọ bụ hazie karama gị, ha nwere ike iji ozi ngwaahịa gị gosipụta ngwa ngwa. Iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe!
8oz 16oz obosara ọnụ french square iko ihe ọ juiceụ juiceụ karama na metal mkpuchi
Kalama a dị mma maka ihe ọ forụ fullụ zuru oke. Cheedị itinye mkpụrụ osisi grape ma ọ bụ ihe ọ orangeụ orangeụ oroma n'ime karama ndị a? E jiri ya tụnyere egwuregwu ndị ọzọ, ha ga-arụ ọrụ nke ọma.
300ml New Zealand iko na-egbuke egbuke karama mmiri karama na ịghasa mkpuchi
500ml na-ekpocha karama dị ezigbo mma maka soda ma ọ bụ mmiri ịnweta na ndị na-ere ihe ọverageụverageụ dị elu, nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ruru ya egosipụta ọtụtụ ihe na kpochapụwo imewe, ọ ga-fọrọ etinyere niile àmà nke gị ọ beụ businessụ azụmahịa.
1000ml 1 lita French karama iko karama na tamper àmà plastic mkpuchi
Iko mmiri ara ehi a dị mma maka ị drinksụ ihe ọ drinksụ drinksụ n'oge ọ bụla, ma ọ bụ oriri, agbamakwụkwọ ma ọ bụ picnic. Ndị a buru ibu buru ibu, ha dị mma maka ihe ọ forụ forụ, ọ dịkwa mfe ihicha! Ha dịkwa oke mma dị ka ịchọ mma ma ọ bụ dị ka okooko osisi maka itinye tebụl. Igwe karama a na-acha vinteji a na-ejikwa tamper proof na-eme ka ha dị mma maka nnọkọ na mmemme ma ọ bụ onyinye ụlọ. Nwere ike iji ha ugboro ugboro.
Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Glass kalama na mgbapụta Dispenser,